आइपिएलमा दिल्लीको अर्को हार, हैदरावाद ७ विकेटले विजयी
by Nepal Reporter
सनराइसर्ज हैदराबाद इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । गएराती भएको खेलमा हैदराबादले दिल्ली डेयर डेभिल्सलाइ सात विकेटले पराजित गर्यो ।
राजीव गान्धी इन्टरनेशनल स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको दिल्लीले २० ओभरमा पांच विकेट गुमाउदै एक सय ६३ रन बनाएको थियो । पृथ्वी शाहले उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएपनि दिल्लीका अन्य ब्याट्सम्यानले त्यसको फाइदा उठाउन सकेनन् ।
ओपनर ग्लेन म्याक्सवेल दुइ रनमा आउट भएपनि पृथ्वीले पारी सम्हालेका थिए । उनले ३६ वलमा ६ चौका तीन छक्काको मदतमा ६५ रनको योगदान दिए । उनी रासिद खानलको वलमा क्याच आउट भएका थिए । कप्तान श्रेयस ऐअर तेस्रो विकेटका रुपमा ४४ रनमा पवेलियन फर्किए । यहि बाट दिल्लीको पारी कमजोर बनेको थियो ।
सुरुवाती दश ओभरमा ९५ रन बनँएको दिल्लीले बांकी दश ओभरमा जम्मा ६७ रन बनाएको थियो । हैदराबादका लागि रासिदले चार ओभरमा २३ रन खर्चदै दुइ विकेट लिए । एक सय ६४ रनको लक्ष्य हैदराबादले १९ ओभर पांच वलमा तीन विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो । युसुफ पठानले बिस्फोटक ब्याटिङ गर्दै १२ वलमा २७ रन बनँएपछि दिल्लीले सहज जीत हात पार्यो ।
उसलाइ अन्तिम दुइ ओभरमा जीतका लागि २८ रन आवश्यक थियो । जसमा युसुफले १९ औं ओभरमा १३ र २० औं ओभरमा १४ रन बनाए । एलेक्स हेल्सले ४५, शिखर धवनले ३३ र कप्तान केन विलियम्सनले अवीजीत ३२ रन बनँए । दिल्ीका अमित मिश्राले दुइ विकेट लिए । जीतपछि हैदराबाद कोलकत्ता नँइट राइडर्सलाइ पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा पुगेको छ ।
उसको नौ खेलबाट १४ अंक छ । कोलकत्ताको दश खेलबाट दशै अंक छ । सातौ हार बेहोरेको दिल्ली भने प्ले अफ बाट लगभग बाहिर भएको छ । हिजो भएको पहिलो खेलमा चेन्नाइ सुपर किंसले रोयल च्यालेन्र्सज बैङलोरलाइ ६ विकेटले हराएको थियो । आइपिएलमा आज मुम्बइ इन्डियन्स र कोलकत्ता तथा किंस इलोभन पंजाब तथा राजस्थान रोयल्स बीच खेल हुनेछ ।
Tags: Delhi DareDevilsIPLSunrisers Hyderabad
CRICNEPAL Staff writes and manages all the news in the Nepali language. The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of Cricnepal.com
दिल्ली आइपीएलकाे क्वालिफायर्समा
सन्दिपकाे टिम हैदारवादसँग खेल्दै, सन्दिपकाे माैका कति ?
कोलकत्ताले मुम्बई इण्डियन्सलाई ३४ रनले हरायाे
आइपीएलमा राजस्थान र हैदरावाद विच प्रतिस्पर्धा
राजस्थानले काेलकातामाथि ३ विकेटकाे जित निकाल्याे
आईपीएलमा काेलकाता र राजस्थानकाे भिडन्त